Ibhedi ephezulu yeKing kumbindi weNairobi - I-Airbnb
Ibhedi ephezulu yeKing kumbindi weNairobi
I-wifi ekhawulezayo ye-75 Mbps kunye nendawo ekhethekileyo yokusebenzela kwigumbi lokulala.
Indlu yeJabali Luxury ifakwe ngobuchule ukukunika amava ongasoze ulibaleke kwenye yezona ndawo zikhethwayo zaseNairobi.
Ime kwindawo yaseKilimani, imizuzu engama-20 ngemoto ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya ecaleni kwendlela yeArgwings kodhek kunye nemizuzu emihlanu ngemoto ukusuka kwindawo edumileyo yeYaya mall, Adlife plaza, Prestige plaza kunye neValley Arcade. Yindlu ekhuselekileyo enenkampani yokhuseleko kunye nendawo eyaneleyo yokupaka. Lindela ukufumana indawo yethu eSerene, enomoya omninzi omtsha!
Yonwabela Ifulethi LONKE (akukho kwabelana nezinye iindwendwe okanye iindwendwe).
Yonwabela amagumbi afudumeleyo, indawo ephumlayo ukusuka kumgangatho weplanga omenyezelayo waseFinnish, ukuya kwigumbi layo lokulala elizolileyo neliphangaleleyo, elineekhethini ezinzima eziba mnyama kwaye zivumela ukulala kwasekuseni okugudileyo.
Wonwabele amagumbi ethu aqaqambileyo anokukhanya kwendalo okuninzi emini. sinesefu yezinto zakho zexabiso ngokunjalo.
Yonwabela iseti yethu ENTSHA yefenitshala kunye nezixhobo zombane ezibandakanya;
-Izitulo zethu eziNgcono kakhulu, ezimdaka ngeSuede RECLINER kwikhaphethi ecocekileyo yaseTurkey.
- ITHEBHA YOMSEBENZI EMHLE kunye nezihlalo ezibini ukuvumela intuthuzelo njengoko uphumeza umsebenzi wakho weofisi.
-Umenzi weKofu we-ELEKTA weyona mveliso yethu yekofu igqwesileyo yaseKenya.
- Inkqubo ethembekileyo yeshawari HOT.
-KUKUMKANI SIZE Ibhedi yeMahogany enezibane zokufunda i-barometer, kunye nazo zonke iintlobo zeentambo zokutshaja iifowuni kwindawo yokumisa ebusuku.
-I-SMART 55 yethu ye-intshi ye-Smart TV ilungile ngeNetflix, iYouTube, iCable TV evela kubaboneleli benkonzo ababini, iDSTV kunye neZUKU, isidlali seDVD kunye nokukhawuleza kwethu okukhulu, 30 Mbps hotspot yendlu yonke. Kubathandi bebhola ekhatywayo, unokubukela yonke iPremier League yakho yebhola ekhatywayo apha mahala !! Jonga nje iDSTV supersport channel 203.
-Iwasha ye-LG kunye neyomileyo yomsebenzi wakho wokuhlamba impahla.
Chitha ixesha kwipatio yophahla okanye uye kwimiboniso bhanyabhanya okanye uthenge kwiivenkile ezikufutshane ezintlanu ezizezi; IPRESTIGE plaza, iJUNCTION mall, i-Valley arcade, i-ADAMS arcade, i-LAVINGTON mall, i-ADLIFE plaza kunye neziko le-YAYA.
UKUPAKA kuyafumaneka kuluhlu lwethu simahla. Unogada wakho uya kuvuma ngakumbi ukukunceda ngeebhegi zakho.
Thatha iTeksi / UBER kwiindawo ze-WILDLIFE zaseNairobi ze-ANIMAL ORPHANAGE, i-NAIROBI NATIONAL PARK, i-SAFARI WALK, i-MAMBA VILLAGE, i-BOMAS YASEKENYA, i-GIRRAFE CENTRE, i-BUTTERFLY CENTRE, i-DAVID SHELDRICK ELEPHANTE indawo yokutyela, okanye indawo yokutyela, , apho ufumana isampuli GAME inyama kunye nokuzonwabisa.
4.91 · Izimvo eziyi-217
Uluhlu lwethu lukwindawo yokuhlala eneendawo ezikufutshane nendawo yokutyela i-habesha yase-Ethiopia, isikolo sase-Cavina saseBritane, indawo yokutyela yegadi yendyebo kunye neklabhu yaseKiza. Luhambo lwemizuzu emihlanu ukuya kwindawo yezithuthi zikawonke-wonke. Le ndawo ibonelela nge-atmospehere efanelekileyo yokuhamba ngokuzonwabisa ekuseni nangokuhlwa.
Ngelixa ndifikeleleka ngokulula kwifowuni, ndiyazama ukukuvumela ukuba wonwabele imfihlo yakho ngokuphazamiseka okuncinci kakhulu.